Falastiiniyiinta waxay rajaynayaan inay ku qoraan Xebroon UNESCO inay tahay Goobta Dhaxalka Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Falastiiniyiinta waxay rajaynayaan inay ku qoraan Xebroon UNESCO inay tahay Goobta Dhaxalka Adduunka
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Falastiin • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Iyada oo qayb ka ah dadaalladeeda ay ku kasbanayso taageerada caalamiga ah ee dawlad madax-bannaan oo Falastiin ah oo ku taal Daanta Galbeed, Marinka Gaza iyo Bariga Qudus, Falastiiniyiintu waxay ka codsadeen UN-ta ee Ururka Waxbarashada, Sayniska iyo Dhaqanka (UNESCO) inay ka ilaaliso Magaalada Qadiimiga ah ee Hebron Israel ka dhigaysa goob Falastiiniyiin ah oo dhaxalsiiya adduunka. UNESCO ayaa lagu wadaa inay u codeyso arintan usbuuca soo socda, Israel oo si weyn uga soo horjeedo talaabada ayaa riixeysa codeyn qarsoodi ah.
Horraantii bishan, Israa’iil ayaa horjoogsatay koox UNESCO ah inay booqdaan magaalada, halkaas oo qiyaastii 800 oo Yuhuud ah oo deggen ay ku nool yihiin 100,000 oo Falastiiniyiin ah. Bartamaha magaalada qadiimiga ah waxaa ku aasan dhaqankii Ibraahim, oo Falastiiniyiintu ugu yeeraan masaajidka Ibrahimi, iyo Yuhuudda, Qabrigii Awoowayaasha. Guud ahaan Xebroon, iyo gaar ahaan goobta diinta, waxay in muddo ah bar toos u ahayd rabshadaha Israa’iil iyo Falastiin.
Israel ayaa ku riixeysa UNESCO inay qabato codbixin qarsoodi ah halkii ay ka ahaan laheyd codka furan ee caadiga ah, maadaama ay aaminsan tahay in cod furan, 21-ka dowladood ay u codeyn doonaan codsiga Falastiin. In kasta oo “Falastiin” UN-ku u aqoonsanayn dal rasmi ah, haddana waxay leedahay xaalad gaar ah oo ah “goobjooge aan dawli ahayn” waxayna ku biiri kartaa hay'adaha UN-ka sida UNESCO.
Falastiin waxay xubin ka ahayd UNESCO ilaa iyo 2011 waana wax iska caadi ah inaan ka codsano UNESCO si aan uqorno meelaha muhiimka ah ee aan ka nahay Falastiin meelaha hidaha aduunka. ” Cumar Cabdallah, madaxa waaxda Qaramada Midoobay ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Falastiin ayaa u sheegay The Media Line.
Abdallah wuxuu sharraxay in tani aysan ahayn markii ugu horreysay oo Israa’iil ay ka hor-istaagto ergooyinka caalamiga ah inay galaan dhulka Falastiin.
"Israel waxay ujeedkeedu yahay inay ka hortagto inay arkaan xadgudubyada Israel ee ka dhanka ah hidaha iyo dhaqanka Falastiin, laakiin markan waa mid gaar ah oo gaar ah," ayuu yiri.
Ujeedada kaliya ee loo aqoonsan yahay magaalada qadiimiga ah ee Hebron inay tahay goob Falastiiniyiin ah ayaa ah in la ilaaliyo magaalada oo la calaamadiyo qiimaha taariikhiga ah ee ay ku leedahay adduunka.
“Iyadoo aan loo eegin qolo kasta oo ay ka tirsan tahay magaalada qadiimiga ah ee Hebron, waxay ku taalaa dhul Falastiin ka tirsan waana in lagu qoraa sidan; waxay leedahay qiime caalami ah qof walbana waa uu gaari karaa. ” Ayuu sii raaciyay Cabdallah.
Buugga Bilowgii Hebron wuxuu ku qoran yahay meeshii uu Ibraahim - aasaasihii tawxiidka iyo awoowe u ahaa Yuhuudda iyo Islaamkaba - uu ku iibsaday “Godka Machpela” oo ah goob gaar ah oo lagu aaso xaaskiisa uu jeclaa Saara.
"Xebroon waa xididka taariikhda qaran ee Yuhuudda, waxaa muhiim ah in la siiyo sharaf iyo ixtiraam waalidka dadka Yuhuudda ah ee halkaas lagu aasay saddex kun oo sano ka hor," Yishai Fleischer, afhayeenka Jaaliyadda Yuhuudda ee Hebron, ayaa u sheegay The Khadka Warbaahinta.
Fleischer ayaa u aragta UNESCO mid u xaglinaysa Israa’iil, waxayna sheegtay in ku qorista goobtaas mid Falastiiniyiin ah inay lamid tahay baabi’inta hidaha Yuhuudda. Bishii la soo dhaafay, UNESCO waxay soo saartay qaraar sheegaya in Israa’iil aysan sheeganayn Qudus - tallaabadaas oo ka careysiisay Yuhuudda adduunka oo dhan.
Fleischer wuxuu leeyahay Hebron waa magaalo isku dhaf ah oo Carab iyo Yuhuud ah.
“Maamulka Falastiin wuxuu halkan ku hareeraysan yahay qayb ahaan, laakiin sidoo kale waxaa jira magaalo Yuhuud ah oo ku xigta; Uma yeedhi doono magaaladii hore dhul Falastiin, ”ayuu yidhi.
Falastiiniyiintu waxay yiraahdaan Hebron muddo dheer ayey ahayd goob muhiim u ah Muslimiinta.
"Tan iyo furitaankii Islaamka ee dalalkan, Masjidka Ibrahimi waxaa loo arkaa inuu yahay goobtii afraad ee barakaysan ee Muslimiinta ka dib Mecca, masaajidka Al-aqsa (Qudus) iyo masjidka Al-Nabwi (Madiina ee Sacuudi Carabiya)", Ismael Abu Alhalaweh , Maareeyaha Guud ee Awqaafta Hebron ayaa u sheegay The Media Line.
Muslimiinta ayaa u socdaalaya Xebroon iyagoo ka kala socda daafaha dunida si ay u soo tukadaan, ayuu yidhi, isla markaana dhaqdhaqaaqyada Israa’iil waxay halis gelinayeen xuquuqdaas.
"Israel waxay ku hareeraysay magaaladii qadiimiga ahayd isbaarooyin iyo caqabado," ayuu yiri. "Dadku waa inay ku tukadaan iyagoo ilaalinaya ciidamada amaanka ee Israel, qof wal oo Falastiin ahna waa in la hubiyaa amaanka wadada uu galayo iyo hadii uu soo galayo."
Sannadkii 1994, intii lagu guda jiray bishii barakaysnayd ee Ramadaan - waa bil soon oo lagu maamuusayo soo dejintii ugu horreysay ee Qur'aanku u soo dejiyey Muxammad sida ay aaminsan tahay diinta Islaamka, nin Yuhuudi ah oo degay ayaa toogasho ku diley 29 qof oo muslimiin ah oo ku cibaadeysanayey masaajidka dhexdiisa isagoo tukanaya. Intaa ka dib, Israail waxay u qaybisay goobta barakaysan laba meelood - badh masaajid iyo badh sunagog - oo leh irrido gooni ah.
Nidaam rasmi ah oo lagu wadaagayo goobta ayaa la gaadhay 1997 iyada oo Yuhuudda iyo Muslimiinta mid kastaaba uu keligiis marin u helayay goobtaas ciidaha diiniga ah.